Jaamacadda Muqdishu qeybta Bosaso oo Ciyaar u qabatay Ardayda ka Qalinjabisay(Sawiro) | SAHAN ONLINE
Jaamacadda Muqdishu qeybta Bosaso oo Ciyaar u qabatay Ardayda ka Qalinjabisay(Sawiro)
Jaamacadda Muqdisho Qaybta Bosaso ayaa sanad walba u qabata ciyaar kubadda cagta ah ardayda qalinjabiyaasha taas oo ay si gaara ugu maamuusto dadaalkii dheeraa ee ay sanadihii la soo dhaafay soo mareen.
Ciyaartaan oo ahayd mid si heer sare ah loosoo agaasimay ayaa waxaa fooda isku daray ardayda qalinjabiyaasha oo lagu sagootinayey iyo ardayda sannadda 4aad ugudtay ee Jaamacadda.
Labadan kooxood ayaa waxa ay soo xuleen ciyaaryahanadi uga qayb qaadan lahaa ciyaarta oo midwalbana uu ku taamayey sidii uu koobka u hanan lahaa xasuus fiicana uga tagi lahaa Jaamacadda.
Haafkii hore ee ciyaarta ayaa ku soo idlaaday eber iyo eber labada kooxoodna ay ismari waayeen, haafkii dambena weerer iyo weerar celis waxa uu ku soo dhamaatay barbardhac gool la’aan ah. Si loo kala saaro labada kooxood ayaa waxaa loo dhigay gool ku laad (rigoore) waxa ay guusha ku raacdayna kooxda sanad afraad ugudbaysay.
Gunaanadkii maamaulka Jaamacadda ayaa gudoonsiiyey ardayda bilad sharaf iyo abaalmarino kaladuwan labada dhinac ee ciyaartooyda. Sidoo kale waxaa koobka laguduunsiiyey ardaydii sanadda 4aad ugud baysa ee ay guushu raacday.